18 ruux oo ku geeriyootay qarax saaka ka dhacay duleedka Muqdisho-Sawirro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
18 ruux oo ku geeriyootay qarax saaka ka dhacay duleedka Muqdisho-Sawirro
MAREEG 30 June 2016
18 ruux oo rayid ah ayaa ku geeriyootay gaari nooca dadweynaha qaada ee loo yaqaano Mini-bus kadib markii uu ku qarxay bomb la dhigay waddada dhicaceeda subaxnimadii saaka oo Khamiis ah, dhacdada ayaa ka dhacay deegaanka la foole oo ku dhaxeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye.
“Dhammaan 18 qof ee saarnaa waa ay geeriyoodeen. Bombka ayaa ahaa midka meelaha fog fog laha hago ee remote-ka ah,” sidaasi waxaa sheegay C/qaadir Maxamed oo ah sarkaal booliiska ka tirsan oo goobta tagaya.
Nuur Axmed, waxaa uu wade ka yahay mid kamid ah gawaarida dadweynaha ee isticmaala waddaas waxaana uu wakaalada Reuters u sheegay in gaariga miinada lala eegtay uu dhaafayay gaari kale oo ay ciidan saran yihiin, hase yeeshee kii askarta ay la soctay uusan waxba soo gaarin.
Dadka ku dhintay gaariga ayaa waxaa kamid ah haween iyo carruur, waxaana ay ku sii jeedeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha hoose oo 30km u jirta magaalada Muqdisho.
Culimadda Soomaaliyeed oo wax aan lal yaab ah ugu yeeray Siyaasada qaran ee Jinsiga
Golaha wasiiradda oo Culumaa`udiin iyo wax garad ka dhagaysanya talo ku saabsan Siyaasadda Qaranka ee Jandarka